डा. पुन भन्छन्- न्यायको पक्षमा उभिने नेपालीप्रति आभारी छु – Kantipur Hotline
मिडिया र जनताको आवाजले कारबाही रोकियो
डाक्टर भएर किन जान्ने हुने ? चेतना फैलाउँछु भन्दै किन बोल्ने ? आवश्यक परे मन्त्रालयका प्रवक्ता बोल्छन् भनेर त मिडियामा उहाँहरूले बोल्नुभएकै हो नि । छापिएकै छ नि ।
[ नयाँ पत्रिकाबाट ]
ओम्नीलाई‌ भुक्तानी ‌दिन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको‌ दबाब
भारतमा कोभिड संक्रमितको संख्या १७ हजार नाघ्यो